Facebook မှာ ကိုယ့် Post ကို ဘယ်သူ Like လုပ်နေလဲ ဘယ်သူက တစ်ခါမှ မလုပ်လဲ သိချင်လား . ဒါလေး ဒေါင်းလိုက် - MPPG
Home / Uncategorised / Facebook မှာ ကိုယ့် Post ကို ဘယ်သူ Like လုပ်နေလဲ ဘယ်သူက တစ်ခါမှ မလုပ်လဲ သိချင်လား . ဒါလေး ဒေါင်းလိုက်
Facebook မှာ ကိုယ့် Post ကို ဘယ်သူ Like လုပ်နေလဲ ဘယ်သူက တစ်ခါမှ မလုပ်လဲ သိချင်လား . ဒါလေး ဒေါင်းလိုက်
minokekar May 14, 2016	Uncategorised 2,641 Views
အရမ်းမိုက်တဲ့ apk တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ဗျာ.
ဘာလဲဆိုတော့ Facebook ရဲ့ post ကို ဘယ် သူ Like ပေးနေလဲ ဘယ်သူက တစ်ခါမှ မပေးတာလဲ .. ဆိုတာလို ဒီ apk လေးနဲ့ ခွဲလို့ ရမှာပါ..
WHOisFRI app က ဖွင့်လိုက်တာနဲ့
မိမိရဲ့ နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ status ကနေ စပီး Status 30 တိတိ ကို စစ်ပေးမှာပါ။
Status 30 အတွင်းမှာ status တခုလောက်ကို Like ထားတဲ့ သူကိုတောင်
FRI who LIKE >> YOU စာရင်းမှာ ခွဲပေးမှာပါ။
Status 30 အတွင်းမှာ တခုတောင် မLike ဖူးတဲ့ သူတေကိုတော့
FRI who NEVER LIKE >> YOU စာရင်းမှာ ခွဲပေးမှာပါ။
မိမိ Friend ထဲကမဟုတ်ပေမဲ့ Status 30 အတွင်းမှာLIKE ပေးထားတဲ့ သူစိမ်းတေကို တော့
NOT FRIEND BUT LIKE >> YOU စာရင်းမှာ ခွဲပြပေးမှာပါ။
Un wanted List က Friend တေကို Unfriend လုပ်ပစ်နိုင်ပါမယ်
No Friend List ထဲက လူတေကိုတော့ wall ကို သွားကြည့်နိုင်မှာပါ။
ဖို်င်ဆိုဒ်က လည်း မကြီးတော့ ကိုယ့် fri တွေကိုစစ်ဖို့ အဆင်ပြေတာပါ ငိငိ
Download WHOisFRI.apk (168.5) KB
Download Dropbox Link
Previous X Bo – M3 MT6572 Display Error Fix by Min Oke Kar
Next Oppo R2001 Dead In Vibrate Only Fix By MIn Oke Kar